Fumana ukuvulwa kwam kubantu besithathu ngaphambi kokumiliselwa kwe 'AirTags' | Ndisuka mac
Fumana ukuvulwa kwam kubantu besithathu ngaphambi kokumiliselwa kwe 'AirTags'
Enye yeenkcukacha ezifunekayo ukuze ukwazi ukusebenzisa i-Apple AirTags ekucingwa ukuba yiyo Fumana isicelo sam sivulelwe abantu besithathu. Ewe, kubonakala ngathi i-CES yalo nyaka ijongisisa ezinye zeendaba njengoko kunjalo kwaye emva kokubhengezwa kukaBelkin ukuba izakusebenzisa "Ukukhangela" kwii-headphone ze-SoundForm Pro, iingcango zivulelwa ii-AirTags.
Kwaye ngaphandle kokuvula usetyenziso lwe-Apple lwendalo kubantu besithathu, kunzima ukulawula ukukhangela ii-AirTags. Kungenxa yoko le nto xa iindaba ze ezi ntloko zeBelkin ziya kuthi ziboniswe ngokwendalo kwi-app Ngendlela efanayo nezixhobo zethu ze-Apple ezenzayo, ukufika kungekudala kwee-AirTag kwakucingelwa ngayo.
Ngale nto, lo msebenzi ungena kwifayile ye- ngaphakathi kweNkqubo yokuFumana iZibonelelo zam ukuba i-Cupertino yaphehlelelwa ngoJuni ophelileyo we-2020 wokuqinisekisa iimveliso zomntu wesithathu kwimveliso yokukhangela imveliso. Ke sijamelene nelinye inyathelo lokuphela kwamahemuhemu kunye nokufika okusemthethweni kweeAirTags okanye nantoni na abafuna ukuyibiza ngeApple.
Eli nqaku lisenokulinganiselwa kubasebenzisi. iimveliso ze-Apple ezizodwa kunye nezatifikethi kuba yindawo ekufumanekeni kuyo ekugqibeleni ... Kodwa kule meko ukufika kwezixhobo ezitsha kwesi siqinisekiso kuvula ucango ngqo kwiApple AirTags, siza kubona xa befika kwaye ukuba izixhobo esizibonileyo kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo NguNomad babekwindlela elungileyo ngaphakathi kwemveliso ka-Apple.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Amahemuhemu » Fumana ukuvulwa kwam kubantu besithathu ngaphambi kokumiliselwa kwe 'AirTags'
I-Sonos yazisa ngeKhithi yokuTshintsha iBhetri kwi-Sonos Move
I-CES 2021: Uvulindlela wazisa umamkeli weCarPlay ngeModyuli yoLawulo eziMeleyo